Wararkii ugu dambeeyey duullaanka Ruushka: - Wargane News
Home Somali News Wararkii ugu dambeeyey duullaanka Ruushka:
Wararkii ugu dambeeyey duullaanka Ruushka:
▶️ Ciidamada Ruushka ayaa sii wada gulufka dagaal ee ay dhawrka jiho ku doonayaan inay ka qabsadaan Ukraine gaar ahaan caasimadda Kyiv oo xuddun u ah yoolka howlgalkooda.
▶️ Marka laga soo tago dagaalka xooggan ee ka socda magaalooyinka Chernihiv iyo Kharkiv, ciidanka Ruushku waxay awooddoodii isku geeyeen saldhiga ciidamada cirka ee Hostomel oo ah kan millitry-ga Ukraine u adeegsanayaan diyaaradaha Drons-ka ee lagu waabiyey duulaanka Ruushka.
▶️ Afar iyo labaatanka saac ee socda waxay u tahay muhiim weerarka Ruushka, haddii ay noqoto in uu ku guulaysto dagaalka oo uu jabiyo difaaca Ukraine markaas xaaladu way isbeddelaysaa waxaana uu dhisi doonaa nidaam isaga hoos yimaada oo “Maqaarsaar ah”, haddii kale dib u qiimeyn ayuu ku sameyn doonaa hawlgalka sida ay sheegayaan quburada arrintan la socota.
▶️ Waxaa maanta la filayaa in wadahadal ka dhaco xadka Belarus iyo Ukraine, kaas oo ay yeelanayaan Ukraine iyo Ruushka, laakiin lama oga sida uu ku dhacayo kulankan iyadoo Ruushku uu saaka bilaabay weerar culus iyo duqeymo.
▶️ Belarus waxay si buuxda ugu soo biirtay dagaalka, waxaana ay ciidamo ku xoojisay Ruushka, waxaase yaab leh in ay wadahadal qabanayso iyadoo dagaalka qayb ka ah.
▶️ Haddii la wadahadlo waxay u badan tahay in Ukraine dhagaha u raaricin doonto dalabka Ruushka, maadaama reer Galbeedku ku cidleeyeen dagaalka awood ahaan, inkastoo ay saanad ciidan iyo dhaqaale ay ku taageereen.
▶️ Ruushku markii horreysay ayuu qirtay in khasaare ka soo gaaray dagaalka, wasaaradda difaacu ma sheegin tirada dhimashada balse khasaare ayay ku soo koobtay, laakiin Ukraine ayaa sheegatay in ay dishay 4,500 oo askari.
▶️ Ukraine dhankeeda ma sheegin khasaaraha ciidan, waxayse aad u sheegaysaa kan rayidka, ilaa iyo hadda 352 qof oo caruur iyo haweeen ku jiraan ayay qiratay.
▶️ Bangiga dhexe ee Ruushku wuxuu joojiyey in shisheeyuhu kala baxaan Ruushka saamiyada ay ku leeyihiin shirkadaha Ruushka oo dhaqaale jab xooggan ka soo gaaray cunaqabateynta caalamiga ah.
▶️ Lacagta Ruushke ee Ruble ayaa dhulka gashay heerkii ugu hooseeyey abid.
▶️ Cunaqabateynta Ruushka la saaray hadda waxaa ku soo biiray Singapore, Japan iyo dalal kale oo hor leh, waxaa laga baqayaa in nidaamka bangiyada ee Swift Banking ee lacagaha la iskugu diro laga xiro Ruushka.
▶️ Madaxweynaha Ukraine wuxuu sheeganayaa in la caabiyey weerarkii ku socday Kyiv isla markaana ciidamada Ruushka lagu horjoogo 30km meel u jirta caasimadda.
▶️ Madaxweyne Putin wuxuu heegan galiyey aaladda hubka Nukliyeerka laga maamulo, taasi waxay dhalisay dareen wayn.
▶️ Warshad tamarta sameysa oo Ukraine ku taal oo gantaal ku dhacay ayaa laga baqayaa inay dhaliso in sunta radioactive-ka ay siidayso sida ay sheegtay hay’adda IAEA ee qaramada u qaabilsan xakamaynta hubka Nukliyeerka.
▶️ Shirkadda Google waxay xirtay adeegii qariiradaha ama Map-ka Ukraine iyo kan hagaha ama satellite waxaa loo fasirtay in aan la ogaan dhaqdhaqaaqa ka baxaya ama galaya gudaha Ukarina, waxaa jirta in hub badan oo Ukraine loogu deeqay uu ku sii jiro jidka.
▶️ Wakaalada wararka Ruuska ee Tass waxay sheegtay in ergadii Ruushka uga qayb gali laheyd wadahadalka ay diyaar yihiin, waxaa kale oo Belarus hadda soo bandhigtay sawirada meesha lagu shirayo, iyadoo ay suran yihiin saddexda callan ee Ruushka, Ukraine iyo Belarus taasi oo ah calaamad diblumaasiyaddu inay shaqeyn karto oo coladda lagu joojin karo.
Muuqaaladda iyo sawirada aad bay u adag yihiin inaan idinla wadaagno sababo xuquuqda lahaanshaah awgeed laakiin intii suurtagal ah waynu isku dayi doonaa.
Boggan wuxuu saxiixay heshiiska xuquuqda lahaanshaha marka way adag tahay inaan sawir iyo muuqaal kasta idiin soo bandhigno.
@ Wariye Mawliid Xaaji Cabdi
News Desk/ Warqabadka.
Jig-Jiga: Maxay tahay Ujeedadda laga leeyahay in Cabdi Illey Saaaxiibkiisii Loo Soo Xullo inuu Madaxweyne Cusub Ee DDSI??